ကံထူးရှင်များထွက်ပေါ်လာပါပြီ ~ Arakan Student Monks Association
5:21 AM ASMA မွတ္တမ္း, လုပ္ေဆာင္မႈ No comments
🎉🎇🎉 ကံထူးရှင်များထွက်ပေါ်လာပါပြီ ။ 🎉🎇🎉
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ၏ ပညာရေးရန်ပုံငွေရရှိရေး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ကံစမ်းရင်း ပညာဒါနအဖြစ် ကုသိုလ်ပြု အားပေးခဲ့ကြသော ကုသိုလ်ရှင်များထဲမှ ယနေ့ ( ၄. ၁၁. ၂၀၁၈ ) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သော A.S.M.A ပညာရေးရန်ပုံငွေ ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲမှ ကံထူးရှင် ( ၁၇ ) ဦးထွက်ပေါ်လို့လာပါပြီ။
ကံထူးရှင်များစာရင်းထဲတွင် မိမိထိုးထားသော နံပါတ် ပါ မပါကို အောက်ပါ ပုံတွင် တိုက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဆုများပေါက်ခဲ့ကြသော ကံထူးရှင်များမှလည်း အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ဆက်သွယ်ပြီး မိမိ၏ ဆုများကို ဝတ်တလုမ်ကျောင်းသို့လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် ။ ဦးဂန္ဓသာရ = 0991268419
မှတ်ချက်/// ဆုများနှင့် လွဲခဲ့ကြသော ကုသိုလ်ရှင်များအနေအားဖြင့်လည်း ဆုမပေါက်ခဲ့သောလည်း အချည်းနှီးမဖြစ်ရစေပဲ သံဃာတော်များ၏ ပညာရေးအတွက် တစ်စုံတရာ ပညာပါရမီမြောက် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့နှလုံးသွင်း ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေ။
(၁၀) ကြိမ်မြောက် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ပညာဒါန ကုသိုလ်ပြု အားပေးကြဖို့ကြိုတင်၍ အထူးဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။